ရင်ခုန် ရစ်မူး မင်္ဂလာဦး – Hlataw.com
ရင်ခုန် ရစ်မူး မင်္ဂလာဦး
ဒီနေ့ဟာဝတ်ရည် ဘဝမှာဘယ်တော့မှ ဖျောက်ဖျက်လို့ရ မယ့်နေ့မဟုတ်တော့ပါဘူး… အကြောင်းကတော့ ချစ်ရတဲ့ ကိုကိုနဲ့ နှစ်ဘက်မိဘ သဘောတူ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပတဲ့နေ့ ဖြစ်လို့ပါဘဲ… နောက်ဝတ်ရည်ရဲ့ အပျိုစင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့၊ အပျိုစင်ဘဝကို စွန်လွှတ်ရတော့မယ့်နေ့ဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့ရှင်… အပျိုစင်ဘဝကို စွန်လွှတ်ရတောမယ်ဆိုတဲ့ အတွေး တွေးမိတာနဲ့ ဝတ်ရည်ရင်တွေ တလှပ်လှပ်နဲ့ခုန် လာပါတော့တယ်.. ရှက်လိုက်တာကလည်းမပြောပါတော့နဲ့။ ဝတ်ရည်ရဲ့အပျိုစင် ဘဝကို သိမ်းပိုက်မယ့် ကိုကိုကတော့ ဘယ်လိုနေမယ် မသိပါဘူး … သူလည်းပျော်နေမလား၊ဒါမမဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားနေမ လား ဆိုတာ ကိုကို ပဲသိမှာပါ။မနက်ပိုင်းတုန်းကတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ စလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်နေ ပေမယ့် ဧည်ခံပွဲအတွက်အလှပြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ စိတ်တွေတအားလှုပ်ရှားလို့ လာရပြန် ပါတယ်… အလှပြင်ဖို့အတွက်ရေချိုး ပြီးတဲ့အချိန်မှတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ရောက်ချလာပါတော့တယ်။ ရေချိုးပြီးထမိန်ရင်ရှားနဲ့ အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ဝတ်ရည်ကိုစူးရဲတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ကဝတ်ရည်ရဲ့တင်းကားနေတဲ့ရင်နှစ်မွှာကိုကြည့် ရင်းပြဿနာစရှာပါတော့တယ်… ငယ်သူငယ်ချင်းတွေမို့ ပြောမနာ ဆိုမနာ အစနောက်သန်ကြတာကိုး။ ..
““ဟေ့ ဝတ်ရည်နို့တွေကို ညကျ သူ့လူမကိုင်ခင် တို့အရင်ကိုင်ကြည့်ရအောင် ”” ““အေးကောင်းတယ် လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားလို့”” ဆိုပြီးဝတ်ရည်ဝတ်ထားတဲ့ ထမိန်ကို အတင်းဆွဲချွတ်ကြပါတော့တယ်… ရုတ်တရက်မို့ ဝတ်ရည်လည်းရှက်တာရော စိတ်လှုပ်ရှားတာရောနဲ့ထမိန်ကိုရင်နှစ်လွှာပေါ်ကနေ လက်ပိုက်ပြီး အုပ်ထားလိုက်ပေမယ့် အများနဲ့တယောက်မို့ ဝတ်ရည်လက်တွေကိုချုပ်ပြီး ထမိန်စကိုဖြေကာ ဖြူဖြူလွလွ တင်းရင်းနေတဲ့နိုအုံတစ်ခုလုံးကို တစ်ယောက်တစ်လက် ၀ိုင်းကိုင်ကြပါတော့တယ်။ .. ““ ကြည့်စမ်း ကောင်မ ဘယ်တုန်းကတည်းကကြိတ်နယ် ထားလဲ မသိဘူး တင်းကားနေတာပဲ ” ““အေးဟယ် ငါဖြင့်အဲလောက်ရှိမယ်မထင်မိဘူး”” ““ဘာဆေးစားလဲကောင်မ မှန်မှန်ပြော”” ““ ကြည့်ရတာ သူ့လူ ကိုင်ပြီးသားနဲ့တူတယ်”” စသည်ဖြင့်တစ်ယောက်တပေါက်အားပေးကြပါတော့တယ်…
ဝတ်ရည်ကလည်းအားကျမခံ ““ဒါတော့ဘယ်ပြောမလဲ နင်တို့ထက်လှလို့ မနာလိုဘူးမဟုတ်လား”” ဟု စကားနာထိုးလိုက် တော့… ““ အေးပါနောက်တွဲကျလာတော့မှ ဘာဆေးသုံးရမလဲလာမမေးနဲ့”” ““ ဝေးသေး”” ““သြော် နင်ကဒီလိုလား တွေ့ကြသေးတာပေါ့”” ဟုဆိုကာ တကိုယ်လုံးချွတ်ကြမည့် ဆဲဆဲတွင် အလှပြင်မယ့်သူတွေရောက်လာကြ တာမို့ ဝတ်ရည်တို့လည်းမျက်နှာပိုးသတ်လိုက်ရပါတော့တယ်… ဝတ်ရည်လည်းထမိန်ပြန်စည်းရင်း အလှပြင်ခုံပေါ်တွင် အလှပြင်နိုင်ရန် ထိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အလှပြင်ရင်းက သူတို့တွေကတော့ဘေးနားမှနေ၍ မထိကလုတ်ထိကလုတ်စနေကြပြန်ပါတယ် စိတ်ကြိုက်အလှပြင်ဆင်ပြီးကာမှ ““အမအဝတ်အစား တွေရော အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား”” ““အင်း ဟိုပေါ်မှာ အားလုံးအဆင်သင့်ပါပဲ”” ““ ဒါဆို ဝတ်လိုက်တော့မယ်နော်အမ”” ““အင်း”” ““ ဝတ်ရည်တို့ကတော့ သိပ်မတတ်ကြွရှာဘူး”” ဟုပြောရင်း ဝတ်ရမည့်အဝတ်အစားများကို ယူပေးကြသည်။
““ ဟယ် ဘရာစီရာရော စပ်စမိုင်နာရောက ပန်းရောင်တွေပါဘဲလား လှလိုက်တာ”” ““ဝတ်ရည်ကရွေးတတ်လိုက်တျာနထပ ခသူသမ တွေချည်းဘဲ”” ““အေးနော် ကောင်မ ခုကတည်းကတော်တော်ထ”” ဝတ်ရည်လည်း ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ယူ၍ဝတ်လိုက်ရပါတော့သည်။ ““ ဟဲ့ နင်ကလည်းထမိန်ချွတ်ချလိုက်ပါလေဩဒါမှ ပုံကျမှာ”” ““အေးလေဟုတ်သားဘဲ ဝတ်ရည်ရ၊ ဘာလဲနင်က ငါတို့ကြတော့ရှက်တယ်ပေ့ါ”” ““သူလူကြတော့ရှက်မှာမဟုတ်ဘူး”” ဝတ်ရည်လည်းမခံချင်တာနဲ့ ““ကိုကို ဆိုရင်တော သူ့သဘောရှိပေါ့ဟ ဟိ ဟိ”” ““အေးပါကောင်မ ခုထထား ညကြမှတွေ့မယ်”” ““ခုလည်းတွေ့နေတာပါပဲ”” ဟုပြောရင်း ထမိန်ကိုလျှောချလိုက်တဲ့… အခါမှာတော့ ဖြူဖွေးသောအသားအရေနှင် ပန်းနုရောင်ဟာလိုက်ဖက်ညီစွာလှပနေတာကို တွေရပါတော့တယ်…
သူငယ် ချင်းတွေကတောင် ““သူ့လူတော့မသိဘူး ငါတောင်သူ့ကိုဆွဲတီးချင်လာဘီ ”” ““ အေးဟယ်ဟုတ်ပါရဲ့”” ဟုဝိုင်းချီးမွမ်းကြရာ… ဝတ်ရည်ခမျာရှက်သွေး များဖြန်းကာ ကာမစိတ်များပါနိုးကြားလာတော့သည်။ အဝတ်အစားအပြည့်အစုံဝတ်လို့ပြီးသောအခါတွင်မတော့ စပ်စမိုင်နာကအသစ်မို့လားမသိ… တင်းရင်းနေတဲ့တင်ပါးပေါ်မှာအမြောင်းလိုက်လေးချိုင့်ဝင်နေ တာမို့ လုံးကျစ်နေတင်ကိုပေါ်လွင်စေပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေလို ထင်ပါရဲ့ရင်နှစ်မွှာက ခါတိုင်းထက်ပိုထွားနေတယ်လို့ထင်မိပါတော့တယ် … ““ ကဲ ကဲ အပျိုစင်မှတ်တမ်းလေး”” ဟုပြောရင်းဆိုရင်းကီငါငအေူဃောနမေ တဖျတ် ဖျတ်ဖြင့် ဝတ်ရည်ရဲ့အလှကိုဓါတ်ပုံကိုတစ်ပုံပြီးတစ်ပုံရိုက်ယူနေတော့သည်။ သူတို့စိတ်ကြိုက်ရုက်ယူနေချိန် တွင်အခန်းအပြင်ဘက်ဆီမှကိုကိုရဲ့ အသံကိုကြားရပြီး သူငယ်ချင်းတွေကတော့… ““ ခုချိန်မှာဝတ်ရည်ကို ငါတို့ပိုင်တယ် ဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူး”” လို့ ပြောလိုက်တော့ ကိုကိုလည်း လက်လျှော့သွားပုံရပါတယ်… ဝတ်ရည်မှာလည်းကိုကိုကို အလှပြချင်ပေမယ့် လောလောဆယ်ဘာရယ်မှန်း မသိရှက်နေတာကြောင့်အဆင်ပြေသွားပါတယ်… ။
သူငယ်ချင်းတွေက ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတာတောင်အပြင်ထွက်ခွင့်မပေးဘဲဟိုတယ်သွားခါနီးမှသာ ထွက်ရပါတော့တယ်။ ဝတ်ရည်အခန်း ထဲကထွက် လာတဲ့အခါမှာတေ့ာ ပန်းနုရောင်ဝမ်းဆက်နဲ့ဝတ်ရည်ဟာ လှချင်တိုင်းလှနေပါတော့တယ်… သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ထွေရာလေးပါးပြောရင်း လှုပ်ခတ်နေတဲ့စိတ်တွေက တည်ငြိမ်သလိုရှိ ပေမယ့်… ဝတ်ရည်အလှမှာနစ်မျောလျက် ရွှန်းရွှန်းစားစားကြည့်နေတဲ့ကိုကိုနဲ့ ဝတ်ရည်နဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံချိန်မှာတော့ ဝတ်ရည်မျက်နှာမှာရှက်ရိတ်တွေ ထင်ပြီးရှက်သွေးများဖြန်း လို့နေသလို ဝတ်ရည်မှာလည်း ကြုံလာရမယ့်အရေးအတွက်ရင်ဖိုနေမိပါ တော့တယ်… နှစ်ဘက်မိဘဆွေမျိုးတွေစုံသလောက်ရှိနေတာမို့ မျက်နှာမထားတတ်အောင် ကို ရှက်နေရင်း ကိုကိုလက်ကိုတွဲကာ စီးရမယ့်ကားပေါ်တတ်ခဲ့ပါတော့တယ်… ဧည့်ခံပွဲကျင်းပတဲ့ ယုဇနဟိုတယ်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့ပရိတ်သတ် တွေစုံလင်နေပြီး သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ… အခမ်းအနားအစီ အစဉ်များကို ကျင်းပပါတယ်။
ခုချိန်ကစပြီး ဝတ်ရည်တို့ကိုအကြင်လင်မယားဖြစ်ကြောင်း ကြေညာတဲ့အခါမှတော့… ဝတ်ရည်စိတ်တွေဟာဆောက်တည်မရအောင်ကိုလှုပ်ရှားလျက် ကာမစိတ်များကလည်း နိုးကြားလာရပြန်ပါတယ်… ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တာနဲ့ကာမစပ်ယှက်မှုဟာမဖြစ်မနေပါဝင်လာမှာကို သိထားတဲ့ဝတ်ရည်ဟာကြုံတွေ့လာရမယ့် အခြေအနေကိုမလုံမလဲနဲ့ စိတ်တွေလှုပ် ရှားနေမိတာအမှန်ပါ။ အစားစားချိန်မှာတော့ ဧည့်သည်တွေကို ကိုကိုနဲ့အတူ လိုက်လံ နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့… သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ချီးကျူးမှုတွေကြောင့် တသက်မှာတခါကြုံရတဲ့ လက်ထပ်ပွဲမှာ ပျော်ရွှင်နေမိပါတေ့ာတယ်… ဧည့်သည်များတဖွဲဖွဲပြန်သွားပြီးတော့မှ ဝတ်ရည်တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ချစ်စံအိမ်လေးဆီသို့ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်… ။
ကားကိုတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မောင်းနေတာမို့ဝတ်ရည်တို့နှစ်ယောက်က သက်တောင့်သက်သာလိုက်ပါလာရင်း ဝတ်ရည်ကို ကိုကိုက တအားဖက်ထားပါတယ်… ဝတ်ရည်ကလည်း ကိုကို ရင်ခွင်ကိုမှီတွဲရင်း လိုက်ပါလာပါတယ်… ဝတ်ရည်ရဲ့ကိုယ်သင်းနံ့လေးကိုရှူရှိက်လိုက်ရ တဲ့အခါ မှာတော့ ကိုကိုတစ်ယောက် ရင်ခုန်နှုန်းတွေမြန်ဆန်လာရင်း ဝတ်ရည်လက်လေးတွေကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားပါတော့တယ်။ .. ဝတ်ရည်လက်လေးတွေကတော့ နူးညံ့ပြီးအေးစက်နေတာကြောင့် ဝတ်ရည်လည်းပဲ ကြုံတွေလာရတော့… မယ့်အရာတွေကို မချင့်မရဲဖြစ်နေရုံ မှတပါးအခြားမရှိနိုင်တော့ပါ။ အိမ်ရောက်တော့ နှစ်ဘက်မိဘတွေက လက်ဖွဲတွေနှင့် အရင် ရောက် နှင့်နေကြပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတစုကတော့ ကြိုးတားဖို့ ဝတ်ရည်တို့ နှစ်ယောက်ကိုစောင့်နေကြပါ တယ်… ဝတ်ရည်တို့ကားရပ် တယ်ဆိုရင်ဘဲ ကားမောင်းလာတဲ့ သူငယ်ချင်းကကားကို ရီမုနဲ့လော့ချပြီး ခဲဖိုးတောင်းပါတော့တယ်… ။
သူကျေနပ် တဲ့ခဲဖိုးရမှဘဲဝတ်ရည်တို့ လည်းအောက်ဆင်းရပါတယ်… အဲဒီနောက်မှာတော့ တန်းစီပြီးတောင်းခဲဖိုးတောင်းကြတာအိမ်ပေါ်ရောက် တဲ့ထိပါပဲ။ ဝတ်ရည်မှာတော့ ရှက်နေ ပြီး ကိုကို လက်ကိုသာ အားကိုးတကြီးမှီခိုရင်းက ရှက်ပြုံးလေးပြုံးနေမိပါတော့တယ်ရှင်… ပိုက်ဆံတော်တော်ကုန် မှဘဲအိမ်ပေါ်ရောက်ပြီး နှစ်ဘက်မိဘတွေကို ကန်တော့တဲ့အခါမှာတော့ မိဘ တွေက ““ ဒီလင်ဒီမယား အိုအောင် မင်းအောင် ရိုးမြေကြပေါင်း ရပါစေကွယ်”” ““ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ”” အဲဒီနောက်မှာ တော့ကိုကို့ဖေဖေက ““ မင်း သမီးမကြိုက်တာ မလုပ်ရဘူးကြားလား”” ““ ဟုတ်ကဲ့ပါ”” ““ သားကလိမ်္မာပြီးသားပါ သမီးကလဲမဆိုးရဘူးနော်”” ““ ဟုတ်”” လို့ဝတ်ရည်ကပြောရင်း … တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် ကြည့်ဖြစ်ရင်းပြုံး မိပါသေးတယ်… နှစ်ဘက်မိဘတွေကတော့ ပျော်တပြုံးရှိနဲ့ ခဏကြာတော့ .. ““ သားတို့လည်းပင်ပန်းရောပေါ့ နားနားနေနေ နေကြတော့ ””ဆို ပြီး နှစ်ဘက်မိဘတွေပြန် သွားကြပါတော့တယ်… နှစ်ဘက်မိဘတွေပြန်သွားပြီးတာတောင်ဝတ်ရည်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ရှိနေတုန်း။ ““ တော်တော်ရှုတ်တဲ့ဟာ တွေ အလိုက်ကန်းဆိုးကို မသိဘူး”” ဟုစိတ်ထဲမှမကျေမနပ်ရေရွတ်နေမိပါတော့သည်။
တစ်ယောက်ကစပြီး ““ ကဲ ကဲ ရှင်တို့ အိပ်ခန်းသော့ကိုဘယ်လောက်နဲ့ရွေးမှာလဲ”” ““ နဲနဲနဲ့ တော့မရဘူးနော်”” ““ တို့ကဈေးကြီးတယ်”” ““ မရွေးချင်လည်း ဧည့်ခန်းမှာသာ အိပ်ကြတော့ ခြင် ကိုက်ရင်တော့တာဝန်မယူဘူး ဟိ ဟိ”” ဩ ဒါနဲ့ ကိုကိုကပဲ… ““သုံးသောင်းယူကွာ ရော့”” ““ မရဘူး”” ““ ငါုးသောင်း””““တကယ်လား”” ““တကယ်ပေါ့ဟ ဝတ်ရည်ရ”” ““ ပေးလိုက်ပါကိုကိုရယ် မရမချင်းပြန်မယ့်ဟာတွေမဟုတ်ဘူး”” ““ အိုကေ အိုကေ ဒီမှာငါးသောင်း နှိပ်စက်လိုရတုန်းနှိပ်စက် ထားပေါ့”” ““နင်ကလဲ အဲလိုမထင်ပါနဲ့ဟာ နင်ရမှာကငါးသောင်းမကတန်ပါတယ်ဟာ”” ထိုအချိန်တွင်ဝတ်ရည်၏မျက်နှာလေးမှာ ရှက်သွေး လေးများဖြန်းသွားရာ ဖြူနုသောမျက်နှာလေး မှာ ရဲတွတ်၍သွားတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ဗီဒီယိုမရိုက်တော့၍တော်တော့သည်။
ရိုးရိုးသားသားပင်ပြောလင့်ကစား ဝတ်ရည်မှာတော့ ကြုံတွေ့လာရတော့မယ့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအာရုံများကို တွေးတွေးပြီး အပျိုဖြန်းလေးမှာ ရှက်သွေးကြ၍ စိတ်လှုပ်ရှားကာ ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်လျှက် ခေါင်းငုံ့ထားလိုက်လေသည်။ ““ဘာလဲနင်က ဝတ်ရည်ကိုဒီလောက်တောင်တန်ဖိုးမထားဘူးလား”” ““ဟုတ်ပါဘူးဟပေးသော့”” ““ရော့ ဒီမှာသော့”” ““ကဲရပြီးရင်လဲပြန်ကြတော့လေဟာ”” သူငယ်ချင်းရှေတွင်မျက်နှာထားစရာမရှိအောင်ရှက်နေသောကြောင့်… ဝတ်ရည်က ပြောလိုက်သော ဝတ်ရည်ကိုသူငယ်ချင်းတယောက်ကနားနားကပ် ပြီး ““ကောင်မ .. တော်တော်ဖြစ်ချင် နေပြီလား၊ ရှင်တော်တော်ကဲနော်”” ဟုပြောလိုက်ရာ ဝတ်ရည်မှာ နိုးကြားနေသောကာမစိတ်မှာတိုး၍တိုး၍လာ ရကားဝတ်ရည်ရဲ့ပန်းလေးအတွင်းဝယ်… ဝတ်ရည်ချိုချိုလေးများပင်စိမ့်ထွက်လာရတော့သည်။
ဝတ်ရည်လည်းပြာပြာသလဲ နင်ကလဲဟာနင် သလိုဟုတ်ပါဘူးငါတို့က ရိုးရိုးချစ်တာပါ”” ““ဘာမဟုတ်ရမှာလဲ ကိုယ်မျက်နှာ လဲမှန်ထဲပြန်ကြည့်ပါအုံး ရဲတွတ်နေတာ”” ““ အိုးဒါကရှက် တာကိုးဟ”” ““ဘာရိုးရိုးလဲ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးလားဟားဟား”” သူတို့ကတော့ပျော် စရာအဖြစ်ပြောကြပေမယ့် ဝတ်ရည်မှာတော့ရမက်ဆန်္ဒများ ကိုဖုံးကွယ်ရင်းရှက်လွန်း၍ ရှက်ပြုံးလေးသဲာပြုံးလေးသာပြုံးနိုင်ပြီး ကိုကိုကတော့ ဘာမှမဖြစ်လေဟန်သူငယ်ချင်းတွေနဲရယ်မောနေပါတယ်။ ““ဟဲ့ဝတ်ရည် ဒီညနင့်လူနဲ့ မအိပ်ဘဲ ငါတို့နဲ့ အိပ်ပါလား”” ““ဟာ…ဘယ်ဖြစ်မလဲဟ”” ““ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲ ငါတို့လည်းဒီမှာပဲ အိပ်မယ့်ဟာကို”” ““အေးလေဟယ် ငါတို့ငါးသောင်းပြန်ပေးမယ်”” ““နင်တို့နော်မယုတ်မာနဲ့”” ““ယုတ်မာ တာဟုတ်ပါဘူးဟ နင့်ကိုချစ်လို့ပါဟ”” ““ လုပ်မနေနဲ့အပိုတွေ”” ““တကယ်ပါ ဝတ်ရည်ရာ”” ““နင်တို့လိုချင်တာရပြီးရင်လဲပြန်ကြတော့ဟာ ငါစိတ်ညစ်လာပြီနော်”” ဝတ်ရည်ငိုငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ပြောလိုက်မှ .. ““ ပြန်မှာပါဟယ် နင်နေခိုင်းရင်တောင်မနေဘူးတော်ကြာ လူမှားနေမှ ဟီ ဟိ ”” ““ဟင်း မှားစရာလားဟဲ့ ကောင်မနော် ”” ခြေထောက်လေးဆောင့်ပြောလိုက်တေ့ာမှ အိမ်ပေါ်ကဆင်းပါတော့တယ်… ကိုကိုကလည်းသူ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဘီယာဖိုးပေးပြီးပြန်ခိုင်းနေပုံရပါတယ်ရှင်… ပြန်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုကိုနဲ့အတူနှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ထဲပြန်အဝင်မှာတော့ ဝတ်ရည်စိတ်ထဲမှာ ပျော်သလိုလို၊ ဝမ်းနည်းသလိုလို၊ တခုခုကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်သလိုလိုဖြစ်နေပါတော့တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဝတ်ရည်တို့ကို ပျော်နေပြီလို့ ထင်နေကြမှာပါရှင်… ““ ဝတ်ရည် ပင်ပန်းနေပြီလား နားချင်နားတော့လေ”” ““ အင်း ကိုလည်းနားလေ ကိုလည်းပင်ပန်းရောပေါ့”” ““ လက်ဖွဲ့တွေတော့ နောက်နေ့မှဖောက်တာပေါ့”” ““ကောင်းသားပဲ”” ကို ကဝတ်ရည်ရဲ့ပခုံးလေးကို ဖက်ပြီးအိပ်ခန်းရှိဆီလျှောက်လာပြီး အခန်းတခါးကို ဖွင့်ပြီးဝတ်ရည်ကို ရှေ့ကဝင်စေပါတယ်… ဝတ်ရည်မှာတော့ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့် လှမ်းနေသောခြေထောက်တွေဟာ ရပ်တန့်လို့သွားရပါတော့တယ်… ခန်းဝင်ပစ်္စည်းတွေအစုံအလင်နဲ့ အခန်းကျယ်ထဲမှာတော့ အားလုံးဟာနေသူနေသားတကျပါပဲ။ ဝတ်ရည်တို့အိပ်စက်ချစ်ဗျူဟာခင်းမဲ့ ချစ်တလင်းကတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့ကာမတွေကို ပိုပြီးတောက်လောင်အောင် နှိုးဆွနေသလိုရှိနေတာကြောင့် ပါပဲရှင်… ပန်းနုရောင် အိပ်ရာခင်း၊ ခါင်းအုံး၊ ဇာခြင်တောင်တို့ဟာ ဝတ်ရည်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့စိတ်ကို လှုပ်ရှားရိုက်ခတ်စေတာတော့ အမှန်ပါပဲရှင်.. ကိုတွန်းလိုက်မှပဲ သတိပြန်ဝင်လာပြီး ကုတင်ပေါ်မှာမထိုင်ရဲတာကြောင့် မှန်တင်ခုံရှေ့က ခုံလေးမှာပဲ ဝင်ထိုင်လိုက်ချိန်မှာတော့ ကိုကိုဟာဝတ်ရည်နောက်မှာရပ်နေပြီး ဝတ်ရည်ကို စူးစူးရဲရဲ ကြည့်နေတာကို မှန်ထဲမှာတွေ့နေရတာကြောင့် ဝတ်ရည်မှာပို၍ ရှက်အားပိုရကား ကိုကိုက လည်ပင်းမှ လည်ဆွဲကိုဖြုတ်ပေးချိန်မှာတော့ လက်တွေကို ဘာရယ်မသိ ပွတ်နေမိပါတော့တယ်…
““ ကို ခဏအပြင်ထွက်ပေးကွာ ဝတ်ရည် အဝတ်လဲချင်လို့ ”” ကိုက တခုခုပြောမယ်ဟန်ပြင်ပြီးမှ ဘာမှမပြောဘဲ အခန်းအပြင်ထွက်သွားတော့မှ ဝတ်ရည်လည်း ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး အပြာနုရောင်ညဝတ်လေးပြောင်းဝတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ကာကို့ ကိုစောင့်နေချိန်မှာတော့ ဝတ်ရည်ရင်ထဲမှာ ရထားတစင်းခုတ်မောင်းနေသလို ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်နေပြီး ရင်ခုန်နှုန်းတိုးလာတာနှင့်အမျှ ဝတ်ရည်ရဲ့ ပန်းလေးအတွင်းကတစစ်စစ်နဲ့ ပိုမိုဖောင်းကြွလာပေါ့ရှင်… ခဏအတွင်းမှာပဲကိုကို အခန်းထဲဝင်လာပြီး ညဝတ်အင်္ကျီကို လဲဝတ်ပြီး ရှက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ဝမ်းနဲခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကြည်နူးခြင်း များတပြိုင်နက်ခံစားနေရသော ဝတ်ရည်ရဲ့ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လို့နေပါပြီ… ဒါပေမယ့် ကိုကိုနဲ့ ကပ်ပြီးမထိုင်ရဲတာကြောင့်ခပ်ခွာခွာပဲ ထိုင်လိုက်ပါတယ်.. ဝတ်ရည်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ တစ်ထွာလောက်ကွာနေတာပေါ့… ပထမတော့ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းကိုင်တယ်… ခဏလောက်လက်လေးကို ကိုင်ထားပြီးဆုပ်ထားရင်းကနေ… ဝတ်ရည်ပခုံးကိုလှမ်းဖက်လိုက်တော့… ရုတ်တရက်မို့ ရုန်းလိုက်တာကြောင့် ကိုကိုက ““ ချစ်ကလဲကွာ”” ဝတ်ရည်လည်းရှက်ပေမယ့် ကိုကို ကိုသနားတာကြောင့် ““ လူဆိုး”” လို့ပြောပြီး ဝတ်ရည်ဟာ ကိုကိုပြုသမျှနုပြီး ကိုကိုဆန်္ဒကိုလိုက်လျောမယ့် မျက်နှာပေးလေးနဲ့သူ့ရင်ခွင်ထဲ ရောက်သွားတာပေါ့… ရင်ထဲမှာတော့ တလှပ်လှပ်နဲ့ရယ်ပါ…။
ကိုကိုက ဝတ်ရည်နဖူးလေးကို ဖွဖွလေး နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ .. ပြီးတော့ ဆံပင်လေးတွေကို သပ်ပေးရင်း…ချစ်လိုက်တာကလေးရယ်တဲ့… ရင်ထဲမှာဘယ်လိုကြီးဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး… တစ်ကိုယ်လုံးကို…ကြည့်နူးတာလား…ရှက်တာလားမသိတဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်.. ခဏနေတော့…ခပ်ခွာခွာထိုင်ရင်းကနေ ကိုကိုကဆွဲဖက်ထားတာဆိုတော့ ကိုယ်လုံးက တစ်စောင်းကြီး ဖြစ်နေပြီး ညောင်းလာတာပေါ့ …. အဲဒါနဲ့ ကိုယ်လုံးကိုပြန်တည့်ဖို့ လက်တစ်ဖက်နဲ့အားပြုပြီးအထမှာ… လက်က ကိုကို့ပေါင်ကြားထဲကိုသွားထောက်မိရက်သားဖြစ်နေတာကိုး…. ။ ပေါင်ကြားထဲက မာမာဖုဖုအရာတစ်ခုအပေါ်လက်တင်မိနေပေမယ့်ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လက်ကိုပြန်မရုတ်မိပဲ… အဲဒီအရာကိုပဲ အုပ်ကိုင်ထားမိသလိုဖြစ်နေပါတယ်…
အဲဒီအချိန်မှာ ကိုကိုလဲ ဆတ်ခနဲတုန်သွားတာကို သတိထားလိုက်မိတယ်… နောက်တော့ ဘာလဲဆိုတာသိသွားတဲ့အချိန်မှာ…အရမ်းရှက်သွားပြီး..လက်ကိုပြန်ရုတ်လိုက်ပါတယ်… နောက်ကိုကိုနဲ့ခပ်ခွာခွာပြန်ထိုင်လိုက်ပြီး..တစ်ကိုယ်လုံးကိုပူထူနေမိပါတယ်… နားထင်မှာလဲသွေးတွေက အဒုတ်ဒုတ်တိုးနေတယ်… အဲဒီအချိန်မှာကိုကိုကလဲ ဝတ်ရည်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်…ရှက်လိုက်တာနော်….. ခဏနေတော့..ကိုကိုက ဝတ်ရည်အနားကိုတိုးလာပြီ…ဝတ်ရည်ရဲ့ခါးကိုလာဖက်တယ်…. ပြီးတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့လက်ကိုယူပြီးသူ့ခါးကိုဖက်ထားခိုင်းလိုက်တယ်… အခုအချိန်မှာတော့ ဝတ်ရည်နဲ့ကိုကိုဟာတစ်ယောက်ခါးတစ်ယောက်ဖက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါပြီ…. ပြီးတော့ ကိုကိုက ဝတ်ရည်ပေါ်ကနေအုပ်မိုးပြီး….ဝတ်ရည်ရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်.. ကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုကို့မျက်နှာက ဝတ်ရည်ရဲ့မျက်နှာနဲ့နီးနီးလာတယ်… နောက်ကိုကို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဟာ ဝတ်ရည်ရဲ့ပါးပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အထိပါပဲ…. ပြီးတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့ ပါးကိုဖွဖွလေးလာနမ်းတယ်… ပြီးတော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ပွတ်ပြီးနေရာအနှံလိုက်နမ်းနေပါတော့တယ်…
ဝတ်ရည်ကိုယ်တိုင်လဲအိပ်မက်ထဲရောက်နေသလိုလို… တစ်ချက်တစ်ချက်..မျက်နှာကိုရှရှသွားတဲ့ကိုကို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းမွေးစစကြောင့်သာ တစ်ကယ်ဖြစ်နေမှန်းသိတာ.. ပြီးတော့ ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုလာထိတယ်… ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုပ်ပြီးနမ်းနေပေမယ့်ဝတ်ရည်က ကြောက်စိတ်နဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုတင်းတင်းစေ့ထားမိတယ်… နောက်တော့ ကိုကိုက…ဝတ်ရည်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုလျှာလေးနဲ့ထိုးတယ်.. အဲဒီအချိန်မှာ နှုတ်ခမ်းတွေဟာ သူ့အလိုလိုကိုဟသွားပါလေရော…. ဝတ်ရည်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေဟသွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုကိုလျှာက ပါးစပ်ထဲကိုတိုးဝင်လာတယ်… ပြီးတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့ လျှာကိုလဲစုပ်ယူလိုက်တယ်…. တစ်ခါမှမခံစားဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတော့..လှုပ်လဲမလှုပ်ရဲပဲ..ကိုကိုပြုသမျှနုနေရတာပေါ့… ဒါပေမယ့် ဝတ်ရည်ကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်… တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ ဝတ်ရည်လဲကျင့်သားရလာပြီး ကိုကိုနှုတ်ခမ်းတွေကိုပြန်စုပ်နမ်းတတ်လာပါတယ်.. ပြီးတော့ ကိုကိုလျှာနဲ့လျှာချင်းပွတ်သတ်တိုးဝှေ့ပြီးနမ်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့… ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့ ခါးလေးကိုပွတ်ပေးနေပါတယ်… ။ ပြီးတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့ခါးကို ညဝတ်အင်္ကျီပေါ်ကနေပွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှတော့ ဝတ်ရည်လဲ ကိုယ်မသိလိုက်ပဲနဲ့ ခါးလေးကော့သွားမိပါတယ်….
ကိုကိုကဝတ်ရည်ကို အိပ်ရာပေါ်အသာအရာပဲ လှဲစေပြီး ဝတ်ရည်ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို နမ်းရှုပ်နေပါတယ်… မျက်နှာတစ်ခုလုံးတင်မကပဲ…နားရွက်လေးတွေကို စုပ်လိုက်… လည်ပင်းကိုနမ်းလိုက်ပါလုပ်နေပါတယ်….. ပြီးတော့ ကိုကို့လက်တွေကခါးကိုဖက်ထားရာကနေ..တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်တက်လာပါတယ်… ပြီးတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့ ရွှေရင်အစုံကိုလက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ထားပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပွတ်ပေးနေပါတယ်… ဝတ်ရည် ရုန်းဖို့စိတ်ကူးလိုက်ပေမယ့် ကိုကို့ရဲ့လက်တွေအောက်မှာ မရုန်းနိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်…. ပြီးတော့ ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့ ညဝတ်အင်္ကျီကျယ်သီးတွေကို တစ်လုံးခြင်းဖြုတ်နေပါပြီ…. ကြယ်သီးတွေတစ်လုံးပြီး တစ်လုံးပြုတ်ထွက်သွားတာကို သိနေပေမယ့် ကိုကို့ရဲ့ အနမ်းတွေအောက်မှာ မလှုပ်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်….
ကြယ်သီးတွေတစ်ဝက်လောက်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့… ရွှေရင်အစုံကိုဘရာပေါ်ကနေပွတ်သပ်နေရင်းအားမရတော့ဟန်နဲ့ ကိုကိုက လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဝတ်ရည်ရဲ့ကျောအောက်ကနေလက်လျိုပြီးဘရာချိတ်လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်…. ချိတ်ပြုတ်သွားတာနဲ့ ရွှေရင်အစုံကအဆီးအတားမဲ့လွတ်ထွက်သွားတာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်… ဝတ်ရည်ရှက်လွန်းတာကြောင့် မျက်စိစုံမှိတ်ထားမိပါတယ်… အဲဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ကိုကိုက… ဘရာကိုအသာလှန်တင်ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဝတ်ရည်ရဲ့ရွေရင်အစုံကို…ကျကွဲတတ်တဲ့အရာတစ်ခုလို ရွရွဖွဖွလေးကိုင်ထားပါတယ်.. ပြီးတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့ လည်တိုင်းကိုနမ်းနေရင်းကပဲ…တဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုရောက်လာပြီး ရင်ညွန့်နေရာကို နမ်းနေပါတယ်… ပြီးတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာကို ဖြည်းဖြည်းချင်းနမ်းပါတယ်… တစ်ခါတစ်ခါ…ကိုကို့နှုတ်ခမ်းမွေးစစက အသားနုနုကိုစူးသွားတဲ့အခါ စစ်ခနဲစစ်ခနဲပဲ….. ။ နောက်ပြီး…ကိုကိုက ထိပ်ဖူးလေးကို အသာငုံပေးတဲ့အခါ..ရင်ထဲမှာ နွေးခနဲခံစားလိုက်ရတယ်… ပြီးတော့ ကိုကိုက ကလေးလေးတွေအမေနို့စို့သလိုမျိုး ငုံပြီးစုပ်ပြီး စို့နေပြန်ပါတယ်။
ရင်ထဲမှာ ယားကျိကျိနဲ့…ဝတ်ရည် မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေပါတယ်…. အဲလို မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကပဲ… ရေငတ်သလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုကျေနပ်သလိုလိုနဲ့ပါ… ပြီးတော့လဲ ကိုကိုခေါင်းကို လက်နဲ့ အလိုလိုဖိထားမိပြီး လူလဲအလိုလိုရင်ဘတ်ကိုကော့ပေးနေမိပါတယ်…… ကိုကိုကလဲ ဝတ်ရည်ကိုကျောကနေသိုင်းဖက်ပြီး အမေနို့ငတ်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပါတယ်… ဝတ်ရည်ရဲ့ အသိစိတ်တွေလွတ်တစ်ချက်မလွတ်တစ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဝတ်ရည်ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိပဲနဲ့…အောက်ပိုင်းမှာလဲ ရွဲရွဲစိုနေပါပြီ…… နောက်တော့ကိုကိုလက်တွေက ခါးကိုဖက်ထားရင်းကနေခါးအောက်ပိုင်းဆီကိုနယ်မြေတိုးချဲ့လာပါတယ်.. အဲဒီနေရာမှာသူတော်တော်အခက်တွေ့နေပုံရတယ်… ဝတ်ရည်က ခြေထောက်ကိုချိတ်ထားမိတာကိုး… ကိုကို့လက်တွေက ဗိုက်ပေါ်မှာပဲ ပြေးနေတယ်…အောက်ဆက်တိုးဖို့ကိုလဲမဝံမရဲဖြစ်နေပုံပေါက်နေပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အနမ်းကတော့ရပ်မသွားခဲပါ.. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝတ်ရည်လဲအသဲတွေယားလာတယ်…ရင်တွေဖိုလာတယ်… အဲဒါနဲ့ ကိုယ်ဘယ်လိုမှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်မိပါတယ် ။
အဲဒါကတော့ ခြေထောက်ချိတ်ထားတာကိုဖြုတ်… ကိုကို့လက်ကိုဝတ်ရည်ရဲ့ ပန်းလေးပေါ်ကို တင်ပေးလိုက်မိတာပါပဲ… အဲဒီအခါ ကိုကိုကနမ်းနေတာကိုရပ်ပြီး ဝတ်ရည်ကိုပြုံးပြပါတယ်.. မျက်နှာကိုတည့်တည့်ကြီးကိုကြည့်ပြီးကို ပြုံးပြတာ…ရှက်လိုက်တာ…ကိုကို့အပြုံးကိုမြင်ရတာ.. ပြီးတော့ရှက်ရှက်နဲ့ ညဝတ်ပေါ်ကနေအုပ်ကိုင်ထားတဲ့ကိုကို့လက်ကိုအတင်းဆွဲဖယ်မိပါလေရော… ဒါပေမယ့် ကိုကိုကမဖယ်တော့ပါဘူး..ညဝတ်ပေါ်ကနေ ဖွဖွလေးအုပ်ပြီးပွတ်ပေးနေပါတယ်… နောက်ခပ်လျော့လျော့ဖြစ်နေတဲ့ ညဝတ်ကိုကျယ်သီးဆွဲလှန်လိုက်ပြီးကိုကို့လက်က ပင်တီလေးပေါ်ကိုရောက်လာပါတယ်.. ပင်တီလေးက ရွဲရွဲစိုနေတာကိုလဲစမ်းမိရော.. ခုနကအပြုံးမျိုးကိုကိုမျက်နှာမှာပြန်ပေါ်လာပါတယ်.. ဝတ်ရည်လဲ…ရှက်ရှက်နဲ့… ကိုကိုတော်ပြီ…မလုပ်နဲ့ကွာလို့ ပြောမလို့ဟာ… ဝတ်ရည်စကားမဆုံးခင် ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုပ်နမ်းလိုက်ပါတယ်… ကိုကို့အနမ်းတွေအောက်မှာ စကားမပြောနိုင်မလှုပ်နိုင်ဖြစ်နေတုန်း… ကိုကို့လက်တွေက ပင်တီပေါ်ကနေအထက်အောက်အစုန်အဆန်ပွတ်ပေးနေပါတယ်…
အဲဒီအခါဝတ်ရည်ကိုယ်တိုင် အဖျားတက်သလိုမျိုးတုန်လာပြီး ကိုကို့နဲ့အနမ်းတွေကို ကိုကို့လည်ပင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖက်ပြီး ပြန်နမ်းနေမိပါတယ်… ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့ တုန်ရီနေတဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို တင်းကျပ်နေအောင်ဖက်ထားပြီ.. လက်တွေက ပင်တီအောက်ကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်…. လက်တွေကပင်တီအောက်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါ…ပထမတော့ ဖွဖွလေးပဲကိုင်ထားပြီး… နောက်တော့လက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ ပန်းလေးရဲ့ပွင့်လွာနှစ်ချပ်ကြားလေးအတိုင်းလိုက်ပွတ်ပေးနေပါတယ် ပြီးတော့ အဲဒီလက်လေးက ပွင့်လွာနှစ်ချပ်ကြားလေးပေါ်ရောက်သွားပြီး အစုန်အဆန်ပွတ်ပေးနေတဲ့အခါမှာတော့ ဝတ်ရည်ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ပါဘူး… တစ်ချက်တစ်ချက် ကျင်ခနဲ ဆစ်ခနဲဖြစ်သွားတဲ့ခံစားမှုနဲ့အတူ.. ထိန်းထားတဲ့ကြားထဲက အ…ဟင့်…ဆိုတဲ့အသံလေးတွေထွက်လာပါတော့တယ်…. ကိုကို့လက်တွေကလဲ ဝတ်ရည်ရဲ့ ဖူးပွင့်လာတော့မယ့်ပန်းလေးပေါ်မှာ..ထင်သလိုကို မင်းမူဆော့ကစားနေပါတယ်… ခဏအကြာမှာ..ကိုကို့ရဲ့လက်တစ်ချောင်းက ပွင့်လွာနှစ်ချပ်ရဲ့အတွင်းကို လျှောခနဲဝင်သွားပါတယ်..
တစ်သက်လုံး တစ်ခါမှမခံစားဖူးတဲ့ခံစားမှုနဲ့အတူ လူကလေထဲကိုမြောက်တက်သွားသလိုမျိုးလဲ ခံစားလိုက်ရပါတယ်.. ဝတ်ရည်ရဲ့ခါးကိုလဲကော့ပေးလိုက်မိသလားမသိ… ကိုကို့ရဲ့လက်က ဝတ်ရည်ခါးအောက်ကို တိုးဝင်ပြီး တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို သိုင်းဖက်လာပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ ကိုကို့ရဲ့နောက်လက်လေးတစ်ချောင်းကလဲ ပန်းလေးရဲ့ထိပ်က ဝတ်မှုန်ဖူးလေးကို တပြိုင်နက်ပွတ်ပေးနေပါတယ်.. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုကို့လက်လေးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကမြန်မြန်လာတယ်… ဝတ်ရည်ရဲ့ ညီးသံတွေလဲ စိတ်စိတ်လာပြီး ကျယ်လာတယ်ထင်ပါရဲ့… ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို အတင်းဖိကပ်ပြီးစုပ်ထားတယ်.. ဝတ်ရည်လဲ ကိုကို့လည်ပင်းကို ဖက်ထားပြီး ခါးလေးကို ကော့ကော့ပေးနေမိလိုက်တာ.. နောက်တော့ကိုကိုရဲ့ အနမ်းတွေဟာအောက်ဖက်ကို ရွှေလျားသွားနေပါပြီ… ဟုတ်ပါတယ် နှုတ်ခမ်းဆီမှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လည်တိုင်၊ နောက် ရင်ညွန့် .. ရင်ညွန့်ကနေ ရင်လွှာနှစ်ခြားကတဆင့် ဗိုက်ပေါ်ကချက်လေးဆီ ကိုရောက်နေပါပြီ… ကိုကို ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ မသိပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ ရိုးတိုးရွတနိုင်လှပါတယ်… လျှာဖြားလေးနဲ့တို့လိုက် သွားလေးနဲ့မနာအောင်ကိုက်လိုက်နဲ့ ဝတ်ရည်ကို ရွသထက်ရွအောင်များ ဆွနေသလားရှင်ရယ်… ကိုကိုရဲ့ခေါင်းရော လက်တွေပါ အနားမရအောင်လုပ်ရှားရင်းဝတ်ရည်ကို သာယာမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကိုကို့ ကိုစိတ်ထဲမှာပိုချစ်လာပါတယ်…
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကိုကို့လက်တဖက်က ပန်းလေးပေါ်မှာ အလုပ်ရှုတ်နေပြီး ကျန်တဖက်ကတော့ ပင်တီလေးကိုခွဆုံကနေပြီး တဖက်ကပ်လို့ ပန်းလေးပေါ်လာအောင် ကြိုးစားနေပါပြီကောရှင်… အနမ်းတွေကလဲ အောက်ဖက်ကိုတိုးလို့ တိုးလို့ ပန်းလေးရဲ့ အပေါ်ဘက်နားမှာ ရှိတဲ့ ပန်းလေးနားကမြက်ခင်းလေးတွေဆီကို အလည်ရောက်လာ ပြန်ပါတယ်… ဩ ““ဘာ လုပ်မလိုလဲကိုကို ရယ် ယားတယ်ကွာ..”” ကိုကို ကတော့မကြားလေဟန်သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်ရင်း မြက်ခင်းလေးရဲ့အောက်နားက လွင်ပြင်ကျယ်လေးမှာစိတ်ထင်တိုင်းပြေးလွှားဆော့ကစားနေပါပြီ .. ဝတ်ရည်ရဲ့ပန်းလေးဟာလည်း ကာမရှိန်တတ်နေတာကြောင့် ပွင့်ချပ်လေးတွေက ရဲရဲနီဆွေးနေပါတော့တယ်…
ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်နေပြီချစ်သူ… ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့ ပင်တီကြိုးကိုအသာဆွဲပြီး ပေါင်တဖက်ကိုကပ်လိုက်ပြီး ပင်တီကြားကပေါ်လာတဲ့နီနီရဲရဲပန်းလေးကို အထူးအဆန်းသဖွယ်ကြည့်နေတာကြောင့် ““ ဟာ… ကို… ကြည့်နဲ့ကွာ ရှက်တယ်…..”” ကိုကိုက ဝတ်ရည်မျက်နှာကို တချက်မော့ကြည့်ပြီး… တခုခုကိုမဖြစ်မနေ လုပ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ““နမ်းမယ်နော်”” ဟော ပြောပြီးပြီးချင်းပဲ နှုတ်ခမ်းတွေက ဝတ်ရည်ရဲ့ ပန်းကို တရှိုက်မက်မက် နမ်းရှုတ်နေပါတယ်… ဘာမှပြန်ပြောချိန်မရလိုက်အောင်ကိုမြန်ဆန်တာမို့ သူ့အနမ်းတွေကို မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးရှင်… ရင်ခုန်စရာအထိအတွေမှာမိန်းမောခဲ့ရပြီး ဝတ်ရည်ရဲ့ဆင်စွယ်ရောင် ပေါင်တန်သွယ်သွယ်တွေဟာ ဘေးနှစ်ဘက်အလိုလိုကားသွားရပါပြီ… သတိပြန်ဝင်လာချိန်မှာတော့ ကိုကိုဟာ ပန်းပွင့်ချပ်လေးတွေကိုလက်နဲ့တိုကစားနေရင်း ပန်းဝတ်မှုန်ဖူးလေးကိုတော့ လျှာဖျားလေးနဲ့ မထိတထိလေးပွတ်လိုက် သွားလေးနဲ့မနာအောင်ခြစ်လိုက်နဲ့လုပ်နေတာ ရူးမတတ်ပါပဲရှင်… အရသာထူးတွေကိုဆက်လက်ခံစားလိုပေမယ့် ကိုကို ကိုအားနာတာကြောင့်.. ““ ဟေး ကို…. တော်ပြီ့ကွာ ဝတ်ရည်ငရဲကြီးပါ့မယ်…..”” ကိုကိုကတော့ ကြိုက်တဲ့မုန့်စားနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လို ဘာမှကိုဂရုမစိုက်ဘဲ ဆက်ပြီးနမ်းနေပါတယ်.. ““ ဟာကွာ ကို တော်တော့ ကွာ… ”” ပြောလိုက်ကာမှပဲ ကိုကို ကပိုကဲပါတော့တယ်… ဝတ်ရည်ရဲ့ အဖိုးတန်ပန်းလေးကို သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ အသာငမ်းငမ်းနမ်းနေပြီး လက်တွေကတော့ ဝတ်မှုန်ဖူးကို အရသာတွေပေးစွမ်းရင်း လျှာဖျားလေးက ပန်းဝတ်လွှာတွေရဲ့ကြားကနေ နက်နဲ့တဲ့ အတွင်းပိုင်းကို တိုးဝင်နေပါတယ်…
ဝတ်ရည်လည်းပြောမရတာနဲ့ လက်နဲ့ ကိုကို ခေါင်းကိုပန်းပေါ်ကနေဆွဲခွာပေမယ့် သူ့ရဲ့အနမ်းတွေက ပန်းလေးပေါ်မှာ အခြေကြခိုင်မြဲနေတာမို့ဘယ်လိုမှရပ်တန့် ခြင်းကိုမပြုနိုင်ရုံမက အားပေးသလိုဖြစ်ရကာ ပန်းလေးရဲ့အတွင်းပိုင်းကို ကိုကိုလျှာက ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး ပျားပိတုန်းပမာ ပန်းဝတ်ရည်များကို စုပ်ယူစားသုံးချိန်မှာတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့ခါးလေးကာ ကော့သွားပြီး တင်ပါးတွေဟာလည်းအိပ်ရာနဲ့ လွတ်သွားရပါတယ်… ။ ဝတ်ရည်ရင်ထဲမှာ လှိုင်းထဲလှေစီးရသလိုဖြစ်နေပြီးစိတ်ထဲမှာလည်း ကြည်နူးခြင်း၊ ရစ်မူးခြင်း ၊ မြတ်နိုးခြင်း၊ အားနာခြင်း တို့ တပြိုင်နက်ခံစားနေရ ပါတယ်… ဝတ်ရည်ရဲ့တွယ်ရာမဲ့လက်တွေကတော့ ကိုကိုဆံပင်တွေကို အကြောင်မဲ့ထိုးဖွကာ ကိုကိုပြုသမျှ စိတ်တိုင်းကျကို ကျေကျေနပ်နပ်ကို ခံယူနေပါတော့တယ် ကိုကို့ခေါင်းကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်ရင်းက ““ အ…ဟင့်…အာ…အို……အင်း …..ဟင်း…..ကိုရယ်… ”” ဝတ်ရည်ရဲ့ညီးတွားရင်း ကိုကိုခေါင်းကို အားကိုးရာတခုသဖွယ် အတင်းဆုပ်ထားမိတာမို့ အနမ်းတွေကို အားပေးသလိုဖြစ်နေလိုလားမသိပါ။
လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ စောစောကထက်မြန်ဆန်လာပြီး ပန်းတခုလုံးကို အားရပါးရနမ်းရှိုက်နေရင်း ခဏအကြာမှာတော့ ပန်းလေးအတွင်းမှလည်း ဝတ်ရည်ချိုချိုလေးတွေဟာ စမ်းချောင်းလေးတခုလို ပန်းအပြင်ဘက်ကို တစိမ့်စိမ့် စီးဆင်းလာရင်း ဟိုးအမြင့်ကြီးကနေပြုတ်ကျလာသလိုမျိုးခံစားမှုနဲ့အတူ ဝတ်ရည်မှာ ခဏတာမျှလောကကြီးကိုအဆက်ပြတ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်… ဝတ်ရည်သိလိုက်ပါတယ်… ကာမရဲ့အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိခံစားလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုပေါ့…။ ကိုကို့လက်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလဲရပ်သွားပါတယ်… ပြီးတော့ ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့ပါးကို ရွှတ်ခနဲနမ်းရင်း… ဩ““ ဘယ်လိုနေလဲ…ကောင်းရဲ့လား…”” ဝတ်ရည်က ““ သိဘူး… ”” လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်… ဟုတ်တယ်လေ…ဘယ်လိုပြန်ပြောရမှာလဲလို့…. ပြီးတော့ ကိုကိုက သူ့လက်ကိုသူပြန်ကြည့်ပြီး တစ်ရှုးတွေနဲ့သုတ်နေပါတယ်… အရည်တွေရွဲစိုနေတဲ့ ကိုကိုလက်ကိုကြည်ပြီး ဝတ်ရည်ရှက်လိုက်တာလေ.. မပြောပါနဲ့တော့ရှင်… ။
ပြီးတော့ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရဲ့ဘေးနားမှာအသာဝင်လှဲပြီးဝတ်ရည်ရဲ့ဆံပင်တွေကိုဖြေရင်း ““ ကို ချစ်ချင်ပြီ .. ”” တဲ့လေ ဝတ်ရည် ခေါင်းပဲငြိမ့်လိုက်သလား ခေါင်းပဲခါလိုက်သလား ဘာလုပ်မိမှန်းတောင်မသိဘူး ကိုကိုကဝတ်ည်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းပြန်ပါတယ်… ဆံမြိတ်ဖြေပြီးရင် ပန်းချွေမှာလားချစ်သူရယ်ရယ်… ကိုကိုရဲ့ထူးကဲတဲ့ အကြင်နာတွေကြောင့်တကြောင်း သူကိုလည်းကိုယ့်လိုပဲကောင်းစေချင်စေတနာတွေနဲ့ ဝတ်ရည် ကိုကို့အနမ်းတွေကို လှိုက်လှုက်လှဲလှဲ တုန့်ပြန်တတ်နေပါပြီ.. ကိုကိုက ဝတ်ရည်ကို တတ်လွယ်သားပဲဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ ပြုံးပြီးကြည်နေပါတယ်… ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညဝတ်ကကျယ်သီးတွေကို လက်တဖက်နွဲ့ဖြုတ်နေတာကြောင့် ဝတ်ရည်ကပဲဝိုင်းပြီးကူဖြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်…ကိုကပြုံးလို နှုတ်ခမ်းတွေကိုဖိနမ်း .. ဝတ်ရည်ကလဲ အားကျမခံ တုံ့ပြန်နဲ့ အတော်ကို ပေးအယူမျှနေပါပြီ… ကိုကို ကိုလဲ ဝတ်ရည်ရဲ့ ညဝတ်ကို ချွတ်လာတာကြောင့် သူချွတ်နိုင်အောင် ကျောလေးကို စောစောကလောက်မရှက်တော့တာကြောင့် ကြွပေးလိုက်မိပါတယ်…. နောက်ကိုကိုက ဘရာလေးကိုပါ ချွတ်ယူနေပြန်တာကြောင့် သူ့အလိုကျ ပခုံးလေးနှစ်ဘက်ပေါ်ကသိုင်းကြိုးလေးကိုဆွဲချနိုင်အောင် လက်မောင်းနှစ်ဘက်ကိုဆန့်ပေးလိုက်တော့ ဘရာလေးကိုအသာအရာချွတ်ယူပြီး ဘရာလေးကိုနမ်းပြီးမှ ဘေးကိုချလိုက်ပါတယ်…။
ကိုယ်ပေါ်မှာအဝတ်အစားဆိုလို့ ပင်တီလေးသာရှိတော့တာကြောင့် ရှက်တာနဲ့ မျက်နှာလေးအောက်ဘက်ငုံ့လိုက်ကာမှ ကျယ်သီးဖြုတ်ထားတဲ့ညဝတ်ကြားက သူရဲ့ တင်းမာနေတဲ့ ဝတ်ဆံဖိုကြီးကိုတွေလိုက်ရတာကြောင့် ရင်ထဲမှာလှိုင်းခတ်သလို လှုတ်ရှားသွားရပြီး သူမျက်နှာကိုပြန်မော့ကြည်တော့ သူ့ရဲညဝတ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ဝတ်ရည်ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကို သိမ်းပိုက်မယ့်ပုံက သားကောင်ရလိုက်လို့စားဖို့ပြင်နေတဲ့ ခြင်္သေလို မာန်ပါလှအကြည့်တွေလိုက်ရတော့… ဝတ်ရည်မှာ တကိုယ်လုံးရော၊ ပန်းထဲကပါတုန်တတ်သွားပြီး ကာမရှိန်ဟာလည်း ပြန်လည်တိုးပွားလာရပါတော့တယ်ရှင်… ။ ပန်းလေးအတွင်းက ဝတ်ရည်ချိုတွေစိမ့်ထွက်နေတာလည်း ပန်းနေရာမှပင်တီတခုလုံးစိုရွှဲနေပါပြီ… အဝတ်ဆိုလို့လည်းဒါပဲရှိတော့တာပါ… ကိုကိုက ဝတ်ရည်ကိုယ်ပေါ်က တစ်ခုတည်းသောအဝတ်အစားဖြစ်တဲ့ အတွင်းခံပင်တီလေးကိုပါချွတ်မယ့်ဟန်ပြင်နေတာကြောင့် ““ ကို….းးးး ရှက်တယ်ကွာ… ချွတ်နဲ့ ”” ကိုကိုက အလိုက်သိစွာနဲ့ မချွတ်တော့ဘဲ ဝတ်ရည်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကို မှောက်ချပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းပြန်ပါတယ်… လက်တွေကတော့ ရွှေရင်နှစ်မွာကို အားရပါးရ စိတ်တိုင်းကျ ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်နေပြီး နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ကိုကိုက ဦးဆောင်ကာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခံစားမှုကိုပေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်… ဝတ်ဆံဖို နွေးနွေးမာမာကြီးရဲ့အတွေ့အထိကလည်း အရှိန်ရပြီးသား ကာမကိုထပ်တိုးစေပါတော့တယ်… ။
လည်တိုင်နဲ့ ရင်ညွန်တွေကို နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ဖွဖွနမ်းလိုက်ချိန်မှာ မောလျှတဲ့ ရှိုက်သံလေးနဲ့ ခွန်အားမဲ့တဲ့လက်လေးတွေက ကိုကိုကျောပြင်ကို ပွတ်သတ်နေမိပါတယ်ရှင်… ကိုကိုက ပေါင်စေ့ထားတဲ့ဝတ်ရည်ကို ခွထားတာကြောင့် ကိုကိုရဲ့ဝတ်ဆံဖိုကြီးဟာ ဝတ်ရည်ရဲ့ပန်းလေးရဲ့ ပွင့်ချပ်တွေနဲ့ ဝတ်မှုန်ဖူးလေးကို လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းမိတ်ဆွေဟောင်းတွေလို နှုတ်ဆက်နေသလိုရှိပါတော့တယ်… နောက်တော့ ကိုကိုက စေ့ထားတဲ့ဝတ်ရည်ရဲ့ပေါင်တံတွေကို လက်တဖက်နဲ့ အသာအရာခွဲပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ နေရာယူနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာမို့ ပေါင်နှစ်လုံးဟာအနည်းငယ်ကားသွားရပါတော့တယ်… ပေါင်နှစ်လုံးကားသွားတော့မှ ကိုကိုက ပင်တီကြိုးလေးကို တဖက်ကပ်ရင်းပွင့်ချပ်တွေ ၊ ဝတ်မှုန်ဖူးတွေကို ဝတ်ဆံဖိုကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနေရာဝတ်ရည် မနေနိုင်တော့ဘဲ့ မကားတကားပေါင်နှစ်လုံးဟာ အတော်လေးကားပေးမိပါပြီကောရှင်… ကိုက ပန်းလေးရဲ့နံရံတွေကို ဖောက်ထွင်းဖို့ကြံစည်ကြိုးစားနေမယ့် ပင်တီကြိုးတွေကတင်းခံနေတာကြောင့် ကိုကိုမှာအခက်တွေနေပါတော့တယ်… ဝတ်ရည်လည်းကိုကို ကိုသနားတာရော.. သူ့အလိုကိုလိုက်လျောခြင်တဲ့ ဆန်္ဒပေါင်းစပ်ပြီး ““ ကို…. ချွတ် ချင်ချွတ်လိုက်လေ…”” ကိုက ကျေးဇူးတင်တဲ့ အပြုံးနဲ့ကြည့်ပြီးပင်တီလေးကို လိပ်ပြီးချွတ်နေချိန်မှာတော့ ရင်ထဲမှာ မဖော်ပြနိုင်တဲ့ ခံစားမှုများခံစားနေရပြီး ဝမ်းနည်းတာလား၊ နှမြောတာလား ဆိုတာ မဝေခွဲနိုင်တော့ပါ… ပင်တီလိပ်လေးကို ပေါရင်းလောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာ ကိုကို ကဝတ်ရည်ရဲ့ဘယ်ဘက်ပေါင်တဖက်ကို အသာဆွဲမပြီး ပင်တီခွလေးထဲက အသာလျိုထုတ်လိုက်ပါတယ်… ပေါင်တံတဖက်မှာတော့ ပင်တီလေးဟာ မှီတွယ်လျက်ပေါ့… ပင်တီတခုလုံးကျွတ်သွားတာမဟုတ်ပေမယ့် ဘာအကာအကွယ်မှမပေးနိုင်တော့ပါဘဲ ပန်းလေးကိုရော ဝတ်မှုန်ဖူးကိုရော၊ မြက်ခင်းနုလေးကိုရော … လွင်ပြင်ပြေပြေလေးကိုပါ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နိုင်သွားပါပြီ… ။
အဲဒါကို ကိုကိုက အခွင့်ကောင်းယူပြီး သေသေချာချာစိုက်ကြည့်နေတာကြောင့် ရှက်တာနဲ့ ဝတ်ရည်ပေါင်တွေကိုပြန်စေထားလိုက်မိပါတယ်… ဒါကို ကိုကို က မခန့်လေးစားဟန်ပြုံးပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိဆွဲထောင်လိုက်ရာ တင်သားနှစ်ခုကြားက ပန်းကလေးဆူဆူကို တွေ့မြင်သွားရပြန်ပါပြီ… ပန်းရဲ့အပေါ်ထိပ်ဝတ်မှုန်ဖူးလေးကို အထက်အောက် စုန်ဆန်ကာ ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်တော့ ပေါင်နှစ်ချောင်းက ဘေးကို အလိုလို ကားသွားချိန်မှာ ပက်လက်အိပ်နေတဲဝတ်ရည်ကို ခါးလေးကုန်းကာ အသာအယာနမ်းလိုက်ရင်း ““အရမ်းချစ်တယ်ကွာ…မနေနိူင်တော့ဘူး၊ အကို့ဟာကို အထဲကိုသွင်းလိုက်ချင်ပြီ”” ““ကို…ဖြစ်ပါ့မလားဟင်… ၊ဝတ်ရည်မနေတတ်ဘူး …”” ““ဖြစ်ပါတယ်ချစ်ရယ်…မနာစေရဘူးစိတ်ချနော်…”” ““ နာရင်ငိုမှာနော်…”” ““ အင်းပါ..”” ကိုကိုကပြောလဲပြောရင်း နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုပ်နမ်းလိုက်ပြီး၊ ထိပ်ဖျားနဲ့ပွင်လွှာနှစ်ချပ်ကြားကို သွင်းရာကနေ တဝက်လောက်ထိရောက်အောင် သွင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ““အား…ကို…အရမ်းနာတယ်…မရဘူး…တအားနာတယ်ကွာ”” … အပျိုစစ်စစ်လေး ဆိုရင်တော့ အစပိုင်းတော့ နာတတ်သည်မို အခုလဲဝတ်ရည်လည်း ငိုရှိုက်သံလေးနဲ့ ကိုကို့ကျောပြင်ကို ဝတ်ရည်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဖိညှစ်ရင်း ဝတ်ရည်မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်လေးတွေ ၀ိုင်းနေတာမို့ သနားသွားတဲ့ကိုကိုက ဝတ်ရည်ရင်သားနှစ်မွှာကို ပွတ်သတ်ကာ ခနနားနေလိုက်ပါတယ်။
ခနနေတော့မှ ခါးကုန်းပြီး ထိပ်သီးခေါင်းလေးတွေကို ငုံရင်းလျှာလေးနဲ့ ပွတ်သတ်ကစားနေရင်း ဝတ်ရည်ရဲ့ ပွင်လွှာနှစ်ချပ်ကြားက အရည်ကြည်လေးတွေ ထပ်ထွက်လာတာနဲ့ ကိုကိုလဲ သူ့ဟာလေးကို ကိုင်ရင်း ထိပ်ဖျားလေးကို သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ““ ပေါင်လေးဖြဲထားပေး၊ သူ့ဘာသူဝင်သွားလိမ့်မယ်၊ ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးနော်၊ ခဏဆိုကောင်းသွားမှာပါ”” ကိုကိုက အားပေးစကားဆိုတာကြောင့် ပေါင်လေးကိုထပ်ကားပေးလိုက်မိချိန်မှာတော့ ကိုကိုက တဝက်လောက်ကိုပဲ ရှေ့ထိုးနောက်ငင် ဖွဖွမှန်မှန်လေး လှုပ်ရှားပွတ်တိုက်နေပါပြီ… ဝတ်ရည်ကအပျိုစစ်လေး ဖြစ်တာကြောင့် ပန်းဟာလေးက တအားကို ကြပ်ထုတ်နေတာပေါ့။ ““ခဏလေး အောင့်ခံလိုက်နော်ချစ်ရယ်၊ တစ်ချောင်းလုံး ဝင်သွားပြီးရင် နာတာတွေ အောင့်တာတွေ၊ ပျောက်ပြီး အရမ်းကောင်းသွားလိမ့်မယ်”” လို့ကိုကိုက ပြောရင်းကပဲ ဝတ်ရည် လက်ကလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး၊ လည်တိုင်လေးတွေကို ငုံ့နမ်းရင်း ရွှဲစိုနေတဲ့ ပန်းလေးထဲကို အဆုံးသွင်းလိုက်ပါလေရော ……. ။
““အား … ကိုရယ်…သေပါပြီ အရမ်းနာပြီး အောင့်တယ် … မရတော့ဘူးကွာ အား …. ”” ပန်းလေးထဲကို ဝတ်ဆံဖိုတစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားတာမို့ စို့ရိုက်ထားသလိုခံစားနေရသလို လှုပ်လို့မရချင်တာကြောင့် မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးပဲ အော်နေလိုက်မိပါတော့တယ်။ ကိုကိုက တစ်ချောင်းလုံး ဆွဲမထုတ်သေးပဲ ဝတ်ရည်ရဲ့ဖောင်းအိနေတဲ့ရင်သားအစုံကို အသာအယာနယ်ဆုပ်ရင်း တဟင်းဟင်းနဲ့ ဖြစ်လာတာကို ကြည့်ရင်း ““ချစ်လေး၊ အရမ်းချစ်တယ်ကွာ၊ တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားပြီ၊ မနာအောင် ဖြေးဖြေးဆောင့်ပေးမယ်နော်”” ““အင်း…”” မိန်းမောသံလေးကို နားထောင်ရင်း၊ တစ်ချောင်းလုံး ဆွဲထုတ်ကာ ရသည်လောက် ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ဆောင့်သွင်းနေပြန်ပါပြီ… နည်းနည်းချင်းဆောင့်ပြီးချိန်မှာတော့ အရည်လေးတွေ အနည်းငယ် ပိုပြီး ရွှဲလာရင်း ဝတ်ရည်က ““ ဝတ်ရည်နည်းနည်းခံနိူင်သွားပြီ၊ကို့သဘော..”” ““အင်း…ချစ်ကိုအရမ်းလုပ်ပစ်လိုက်ချင်တာ၊သနားလို့”” ““ဖြည်းဖြည်းနော်၊
ကို”” ““ အင်းပါချစ်ရယ်အဆုံးထိ ဖြေးဖြေးသွင်းလိုက်မယ်နော် နာရင်ပြော”” လို့ပြောရင်း နည်းနည်းအရှိန်မြှင့်ကာ အဆုံးထိသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်နေပါတော့တယ်ရှင်.. ဝတ်ရည်လည်း ပေါင်လေးတွေကားထားရင်း မျက်လုံးလေးတွေ မှေးစင်းကာ တဟင်းဟင်းနဲ့ ဖြစ်လာရပြန်ရင်း ကိုကို အသွင်း အထုတ်ကို စည်းချက်လိုက်ရင်း အောက်မှ တန်ပြန် ဆောင့်ပေးနေမိပါတော့တယ်.. တစ်ချက်တစ်ချက်တွင် ခေါင်းလေးဟာ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ မော့မော့သွားရပြီး ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတာနဲ့အမျှ ဝတ်ရည်လဲရင်ထဲမှာလှိုက်ခနဲလှိုက်ခနဲဖြစ်နေရပါတယ်… ““အရမ်းပဲကွာ…လူကိုသေမတတ်ပဲ”” ““ ဝတ်ရည် နာလို့လားဟင်…”” ““ အရမ်းဆောင့်တော့ အထဲမှာအောင့်အောင့်သွားလို့ပါ ”” ကိုကိုက ဆောင့်တဲ့အရှိန်ကို နဲနဲလျှော့ချပြီး အဆုံးထိ သွင်းထားလိုက်ကာ ဖြေးဖြေး ညှောင့်ရင်း ဝတ်မှုန်ထိပ်ဖူးလေးကို လက်မလေးနဲ့ ဆွပေးကာမှန်မှန်လေး ဖြေးဖြေးခြင်း ဆောင့်ပေး ပညာစုံပြလို့ ဝတ်ရည်ကို ကာမသုခတွေတလှေကြီးပေးနေပါတော့တယ်..
““ဟင်း…ဟင်း …ကို…အာ့ …”” ““ အား…ကို…ဟင်း …”” ကိုကိုပေးတဲ့ သုခတွေပေါ်မှာ သာယာမိန်းမောရင်း ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြားက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဝတ်ရည်ရဲ့ မပီမသ ငြီးတွားသံလေးများက ကို့ ကို ပိုပြီးဆောင့်ပါတော့ဟု ဆိုနေသယောင် ကိုကို့ စိတ်တွေတအားပေါက်ကွဲလာအောင် ဝတ်ရည်ရဲ့မချိတင်ကဲခံစားနေရသည့် အသံလေးတွေက နှိုးဆွပေးနေ သလိုဖြစ်တာကြောင့် ကိုကိုက အရှိန်ပြန်မြှင့်ရင်း အဆုံးထိဝင်အောင် ပြန်ဆောင့်နေပါတော့တယ်… ဒီတစ်ခါ ဝတ်ရည် မနေနိူင်တော့ဘဲ… ““အိုး …ကို…ဆောင့်လိုက်၊ဝတ်ရည် မနေတတ်တော့ဘူး မခံနိူင်တော့ဘူးကွာ”” ““ဆောင့်လိုက်…ကို .. ဟင်း ..မရတော့ဘူး …ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲ”” ဝတ်ရည်ရဲ့ ဆွဲငင်အားအပြည့်နဲ့တောင်းဆိုနေတာကြောင့် ကိုကိုကအားကုန်ဆောင့်ပေးလိုကလိုက်တာမို့ ဩအိုး … အား …ဟင်းဟင်း…ဩ အိပ်ရာခင်းတွေကို ဆုတ်ဆွဲထားရင်း ပေါင်လေးတွေကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပေးထားနေရင်း ကိုကို့ ကို တန်ပြန်ဆောင့်ချက်တွေနဲ့တအားပြန်ပြန်ဆောင့်ရင်း မျက်စိထဲမှာ လျှပ်စီးလက်သလို … ရင်ထဲမှာ ဓါတ်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရပြီး ဒုတိယမြောက် ကာမသုခကို အပြည့်အဝခံစားကာ ပန့်းလေးထဲက ဝတ်ရည်ချိုတွေဟာ အရှိန်နဲ့ပန်းထွက်ရင်းအပြင်ဘက်ကို စီးကျလာပါတော့တယ်..
ကိုကိုလဲ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကို ဆောင့်ရင်း ဝတ်ရည်အပေါ်မှောက်ကာ ဝတ်ရည်ရဲ့ပန်းလေးအတွင်းက ဝတ်ရည်ချိုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့ရာဝတ်ဆံဖိုလေးများကိုဖြန်းပက် လိုက်ပါတဲ့အခါမှာတော့ဝတ်ရည်ရဲ့ ဗြောင်းဆန်နေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်သက်သွားပါတယ်… ပြီးတော့ ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး…မျက်ရည်တွေနဲ့ နှာရည်တွေပါကျလာတယ်… အပျိုစင်ဘဝကို ချစ်တဲ့သူလက်ပုံအပ်နိုင်ခဲ့လို့ ကျတဲ့မျက်ရည်များပါ။ .. ခဏအကြာမှာတော့ ဝတ်ရည်ရဲ့မျက်နှာလေးဟာ ကိုကိုရဲ့ယုယမှုတွေကြောင့် တိမ်ကင်းတဲ့လလို ဝင်းပကြည်လင်လာပြီး နောက်တကြိမ်အတွက် မချင့်မရဲစောင့်စားရင်းနေမိပါတော့တယ် သေချာတာကတော့ ဒီညမှာ ဝတ်ရည်တို့တစ်ညလုံး အိပ်လို့မရပဲ မိုးလင်းရမယ်ထင်ပါတယ်ရှင် …….. ။ ပြီး.
အပျံ သင်စ အရွယ်